Indlu yelizwe eBaztan (Basque C.)
Ilitye elihle kunye nendlu yelizwe yamaplanga yaseBasque kwindawo emangalisayo yeentaba. Ikumgama weekhilomitha ezimbini ukusuka e-Elizondo kwaye yabuyiselwa ngo-2010.
Irejista yeTurismo de Navarra: UCR01064
Indlu izimele ngokupheleleyo kumniniyo. Kumgangatho wokuqala kukho ikhitshi kunye negumbi lokutyela, kunye ne-dishwasher, umatshini wokuhlamba, i-glass-ceramic hob, i-microwave ... Nantsi indlela yokufikelela kwiveranda kunye negadi apho uya kuba netafile, izihlalo kunye nezitulo zaselwandle.
Kumgangatho wesibini, kukho iifestile zokulala, kukho: igumbi lokulala elinebhedi eyi-1,50 cm kunye neduvet, igumbi lokuhlambela, igumbi elinesofa eyi-1.35 cm, isifudumezi seenkuni, inkqubo yokufudumeza ithermostat, iTV kunye neencwadi kunye nezikhokelo. malunga nemixholo yendawo.
Ilinen yokulala, iitawuli, amalaphu etafile, ii-serviettes kunye nebhaskithi yeenkuni (ukususela ngo-Oktobha ukuya ku-Epreli) zibandakanyiwe kwixabiso.